के छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २६ बैशाख २०७३, आईतवार १५:२३ |
काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योजनावद्ध किसिमले कार्य गर्नेपनि सरकारको घोषणामा उल्लेख छ ।
स्थानीय निर्वाचन मंसीरमा
आईतवार व्यवस्थापिका संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्ने घोषणा गर्नुभयो । यसले स्थानीय निकायसम्म लोकतन्त्रको वास्तविक फल पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । यस्तै गरी सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न आयात कम र निर्यात बढाउनकोलागि विशेष अभियानहरु गर्ने भएको छ । व्यापार घाटा कम गर्नपनि निर्यातमूखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन उचित वातावरणसहित ठोस सूधारको सुरुवात सरकारले गर्ने भएको छ ।
दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ मुक्त नेपाल
सरकारले एक वर्षभित्र आधारभुतरुपमा र २ वर्षभित्र नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै गरी सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र र जलाशययुक्त आयोजना स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । समृद्ध तराई मधेस सिचाई आयोजना यसै वर्षवाट सुरु गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भूकम्प पीडितलाई थप ३ लाख ऋण सुविधा
भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणको कार्यलाई तीव्रताका साथ बढाउँदै भूकम्प पीडितहरुलाई तोकिएको समयभित्रै व्यवस्थापना गरिने भएको छ । भूकम्प पीडितलाई तीन लाखसम्म विना धितो ऋण उपलव्ध गराउने सरकारको कार्यक्रम छ । काठमाडौं तराई जोड्ने फास्ट ट्राक सरकार आफैले बनाउने भएको छ । मित्र राष्ट्र चीनसंग भएका पारवहन, विद्युत प्रशारण लाईन निर्माण लगाएतका सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न तदारुपताकासाथ कार्य अगाडी बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सर्टिफिकेट धितो राखि विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋण
एक प्रदेश एक प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थालको योजना अनुसार अध्यन सुरु गरिने भएको छ । विज्ञान प्रविधिको विकासकोलागि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना हुने भएको छ । विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतमा ऋण उपलव्ध गराउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले यसै वर्ष शिक्षा आयोग गठन गर्ने कार्यक्रममा छ । यसै गरी राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले जनताको लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाहरु सञ्चालन गरेर विदेशमा रहेका श्रमिकको लगानी आकर्षक गर्ने भएको छ । सरकारले देश विकासमा क्षति पु¥याउने सबै प्रकारका स्थानीय वा नेपाल बन्दजस्ता क्रियाकलाप गर्न निषेध गर्ने नीति लिएको छ । बलपूवर्क त्यसो गरिएमा आयोजकहरुहरुबाट भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति असुल गरिने कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पत्रकारहरुको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरेर आचाँरसहित लागू गरिने भएको छ । यस्तै गरी नेपालको आफ्नै भूउपग्रह विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपाली सेनालाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्यहरु गरिने भएको छ । प्रहरीको क्षमता वृद्धि गरिने भएको छ । सवै प्रदेशमा निजामती अस्पताल स्थापना गरिने भएको छ । परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बीच सामञ्जस्यता कायम गरिने भएको छ । सम्वाद, सहकार्यवाट अगाडि बढ्न अपरिहार्य भएको भन्दै संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उचोँ राख्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
Previousदुई जना पत्रकारलाई मृत्युदण्डको सजाय
Nextसरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि कसले कस्तो प्रतिक्रिया दिए ?
सांसदका पिएहरु संगठित
१३ जेष्ठ २०७३, बिहीबार ०२:२८
मधेशी मोर्चाले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने
३१ चैत्र २०७३, बिहीबार ०१:४९